I-medieval typography: iifonti ezinokusetyenziselwa iiprojekthi zakho | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uhlobo lohlobo oluphakathi, olwaziwa ngokuba yifonti ye-gothic, yenye yezona zinto zintle kwaye zamandulo onokuzifumana. Ukuyisebenzisa kuvusa amaXesha Aphakathi, amaxesha eemfazwe, iinqaba kunye nokulwa phakathi kwamagorha aneengcwangu.
Kwaye nangona namhlanje silishiye ngasemva ixesha elidlulileyo, njengomyili wezinto onokuzifumana kwinqanaba elithile ngeprojekthi efuna olu hlobo lokuchwetheza. Ke ngoko, ayikhathazi into yokuba unemithombo embalwa yakudala ukuze ukwazi ukubonisa izindululo ezahlukeneyo kumxhasi wakho, awucingi? Sithetha nge typography yamandulo.
1 I-typography yamandulo: yintoni imvelaphi yayo?
2 Iifonti ezili-13 zamaxesha aphakathi onokuzikhuphela
2.1 Ifonti kaPauls Swirly Gothic
2.2 Umgcini omnyama
2.3 IsiNgesi esidala
2.4 Ukholo luyawa
2.5 Intsapho emnyama
2.7 Uhlobo lohlobo oluphakathi: Ingelosi Inqwenela
2.10 Uhlobo lohlobo oluphakathi: Isicatshulwa seMedici
2.12 UVlad Tepes II
2.13 Uhlobo lwangexesha eliphakathi: I-Frax ebhalwe ngesandla
I-typography yamandulo: yintoni imvelaphi yayo?
Uhlobo lohlobo oluphakathi, okanye uhlobo lohlobo lwegothic, Yenziwe ngenkulungwane ye-XNUMX kwaye injongo yayo yayikukubhala ulwimi lwesiGothic, yayingulowo wayethethwa ngamaGoth. Imvelaphi yayo ifumaneka kwinto ebizwa ngokuba yiCodex Argenteus, okanye kwinguqulelo yayo ethi, "Incwadi yesilivere okanye ibhayibhile." Oku kwabhalwa ngesiLatini kwaye kwabhalwa nguBhishophu u-Ulfilas. Nangona kunjalo, yayiguqulelwe ngokusuka kwisiGrike ukusuka kwibhayibhile yenkulungwane yesi-XNUMX isiya kwisiGothic.
Ukuba uqaphela, i-gothic yoqobo "yayiqondakala", kuba amazwi ayengenazo izinto ezibambekayo. Kukho nezinye iileta ezahlukileyo ngoku onokuzithetha (umzekelo, i-g ekhangeleka ngathi yi-r; okanye i-j ejongeka njenge-g).
KumaXesha Aphakathi, olu hlobo lohlobo lokuchwetheza lwafunyanwa kwaye lwasetyenziswa njengendidi eyahlukileyo kodwa ke luyinika isimbo esiqatha.
Iifonti ezili-13 zamaxesha aphakathi onokuzikhuphela
Kuba sifuna ukuba ukhethe, senze ukhetho lweeleta zamaxesha aphakathi ezinokubangela umdla. Kwaye kwahluka. Iprojekthi oyiphetheyo inokuba luphawu, ipowusta okanye isiciko sencwadi, kunye nezinye izinto ezininzi, kuyakubakho uhlobo lohlobo lwakudala oluhambelana ngokugqibeleleyo neprojekthi nganye.
Ifonti kaPauls Swirly Gothic
Siqala ngohlobo lohlobo oluphakathi oluza kutsala umdla wakho ngenxa yempumelelo enayo. Kwaye kuyilo lwayo luphelele. Ngoku, kuya kufuneka ukhumbule ukuba, ngoonobumba abakhulu abanolu loyilo luhombise kakhulu; unobumba omncinci, nangona i-gothic, ithambe ngakumbi.
Kwelinye icala kulungile, kuba ungasebenzisa oonobumba abakhulu ukufaka ingqalelo kunye noonobumba abancinci ukuze umyalezo uqondwe okanye umbhalo owubekayo ufundwe kakuhle.
Olu hlobo lomthombo wamandulo lelona laziwayo, kwaye oonobumba abakhulu ngabo baphatha uyilo olunokuphumelela ngakumbi ngelixa oonobumba abancinci kulula kakhulu.
Kule meko, ngohlobo lohlobo oluphakathi lokubheja kwimigca emihle, uya kuyifumana enye ibonakala ngathi ikwimeko engezantsi, kodwa kwimeko yoonobumba abakhulu, ezi ziyile ngendlela enomdla ngakumbi kuba, ngaphakathi kwezinye oonobumba, kubonakala ngathi luhlobo lweflegi okanye umzobo ofana nalowo uvelayo.
Lo mthombo wamandulo ungomnye weyona siyithandayo kakhulu kuloo nto ukubonakala njengenkungu okuvelisayo. Ufanelekile, umzekelo, iinoveli zaseScotland okanye ukuba ufuna ukunika iprojekthi umnxeba phakathi kweziporho, i-gothic, indala kunye nemfihlakalo.
Ukuthetha ngoSapho oluMnyama kuya kuba lide. Kwaye kukuba lonke olu hlobo lohlobo lohlobo lwakudala lunezinto ezahlukeneyo ezinokukunceda ufumane oyithandayo. Inkqubo ye- umnyama ngokupheleleyo, kunye nokufiphaza okuthile, kunye nefuthe lokunceda (elinganisa i-3D), njl.
Ngemivumbo eshinyeneyo, uMandulo uvela njengohlobo oluchanekileyo lokuqonda. Ewe, yakhe ubeko luchaphazela oonobumba abakhulu nabancinci; kwaye kukuba le yokugqibela ibonakala, kwezinye iimeko, ukuba yenziwe ngemikhonto okanye ngamanqaku (umzekelo, unobumba ene).
Uhlobo lohlobo oluphakathi: Ingelosi Inqwenela
Le yenye ye oonobumba bamaxesha aphakathi asetyenziswa buqu kuphela, Oko kuthetha ukuba ngekhe uzisebenzisele ukuthengisa, kodwa ayonzakalisi ukuyazi. Incinci kancinci kunaleyo siyicebisileyo isuka kwiOlde English, kodwa ilandela iphethini efanayo nale.
Uyilo lwayo lufuna ukwandisa oonobumba ukufezekisa ukungqubana phakathi kwamagama.
Kule meko, unokuchwetheza mandulo oonobumba abakhulu noonobumba abancinci beza nezinto ezininzi ezichuma. Oko kubangela ukuba kube nzima ukufunda kwiimeko ezininzi, ngakumbi kuxhomekeka kwigama olibekayo. Sicebisa ukuba ungayisebenzisi kumbhalo omninzi.
Ukuphumla, akukho mathandabuzo ukuba intle kakhulu.
Olunye lohlobo lwamaxesha aphakathi kwesitayile intle kakhulu, icocekile kwaye, ngaphezu kwako konke, iyafundeka, nguKhadinali. Iphawulwa ngumgca ohlala ulungile, kunye neenkcukacha ezincinci (ubukhulu becala ukwandisa ezinye iileta ezithile (oonobumba abakhulu noonobumba abancinci).
Uhlobo lohlobo oluphakathi: Isicatshulwa seMedici
Ukuba ujonge ileta enomhombiso osezantsi kwileta, le fonti inokugqibelela. Ukuba ubeka ingqalelo, oonobumba abakhulu banezinto ezininzi kodwa phantse zonke zikumazantsi eleta, Ngelixa oonobumba abancinci becacile, nangona kunjalo, bakwenza kube nzima ukuba kufundwe.
UZenda ngu I-clarita medieval typeface, oonobumba abakhulu nabancinci. Nangona kunjalo, inempawu enye kwaye onke amagama asezantsi ahlala enemigca ediagonal ephuma phezulu nasezantsi. Kwimeko yoonobumba abakhulu, inoyilo phakathi kwemigca ebhityileyo kunye notyebileyo entle kakhulu. Zama ukusebenzisa igama lonke ukuze wenze isiphumo.
UVlad Tepes II
Singatsho ukuba olu hlobo lochwethezi sisicatshulwa kuba uyilo lwayo luneentyatyambo, hayi ngenxa yeentyatyambo, kodwa ngenxa yeenkcukacha. Oko kwenza ukuba kubenzima ukufunda, kwaye sicebisa oonobumba bodwa, mhlawumbi ufuna ukuqaqambisa indawo, kuba ukuba uyayifaka, kuyakubakho amagama angayiqondiyo nantoni na kuba imigca iyabhidana.
Uhlobo lwangexesha eliphakathi: I-Frax ebhalwe ngesandla
Ngaba ujonga uhlobo lohlobo lwakudala olukhangeleka ngathi lubhalwe ngesandla? Ewe unayo le, iFrax ebhalwe ngesandla, ukusuka umgca olula kakhulu obonakala ngathi wenziwe ngesandla. Ewe unobumba omkhulu kunye noonobumba abancinci kulula kakhulu, nto leyo ebenza bafunde ngokucacileyo (kwezinye unokufumana ubunzima, ngakumbi ukuba, ele ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Ukuchwetheza mandulo
Imibala ye-pastel: zithini kunye neephalethi ezingama-50 kunye nemibono yokudibanisa
Amaxwebhu kaGoogle: asebenza njani amaxwebhu kaGoogle